Indlela Kuhlangana Abafazi kwi-China - Eyona Iindlela Asian Uthando Zephondo
Indlela Kuhlangana Abafazi kwi-China – Eyona Iindlela Asian Uthando Zephondo
Mhlawumbi sele baqonde ukuba imiyalezo ingaba kakhulu ebalulekileyo xa nisolko nomngeni kunye nabafazi. Ngoko ke, ngaba anayithathela nje bamfumana Filipinas kwaye ingaba fascinated kunye zombini zabo inkcubeko yawo kwezo meko. Intlanganiso abafazi jikelele kusenokuba nangona sikwimeko yoqoqosho enzima, kodwa oko kusenokuba nzima ngakumbi xa kukho ulwimi barrier kwaye yenkcubeko barrier ukuba ugcina kwenu ukususela ekubeni nako ukufikelela baninzi loluntu isangqa. Nangona kunjalo, kwintlanganiso dating Isitshayina abafazi ngu ngaphezu kukunceda kakhulu elona lincinane, ukususela banako kuba kakhulu uhlobo kwaye loyal companions kuthelekiswa abanye babo Western counterparts. Ukuba ngu-hayi kuthi ukuba kukho necessarily into engalunganga nge-Western abafazi, ke nje ukuba uza mhlawumbi kuba ngcono ithuba ingxowa-elide-lasting budlelwane ukuba ukhetha umhla a Isitshayina umfazi. Ewe, abe harder ukufumana casual hook-phezulu kwi-China kunokuba Entshona ihlabathi apho abafazi ingaba kakhulu”liberated”sexually, kodwa ke ihlela ka-iza kunye territory Isitshayina inkcubeko ingu kakhulu conservative nabafazi ingakumbi zithanda kugxila ingxowa-a iityuwadefault colour umyeni ukwenza iityuwadefault colour ubomi iziqu zabo. Enye enkulu nkxalabo kunjalo, oku: Ukuba unayo akukho loluntu nabo kwi-China, njani ingaba oza kukwazi ukufumana umfazi kwindawo yokuqala. Ngathi uninzi abafazi, Isitshayina ladies bakhetha kuba ungeniswa ngokuthi umntu abo sele vetted yi-zabo abahlobo okanye acquaintances.
Makhe kuqwalasela ezinye iindlela ezahlukileyo ukuhlangabezana abafazi kwi-China: Enye indlela kuhlangana abafazi kwi-China kukuba employ abanye kancinane iinguqulelo yakho”imini umdlalo”techniques. Baya kuba kufuneka kancinane ngenxa kunjalo nisolko nomngeni nge eyahlukileyo inkcubeko. Enye indlela ungakwazi ukwenza oku ukuba unombono isibindi ngu-ngu ngokulula yingqele approaching girls abakhoyo meandering jikelele lemiyezo okanye kwi-street. I-malls bamele kanjalo na engalunganga iindawo ukufumana girls ukuba badibane, kodwa ngokuqinisekileyo yonke le yingqele approaching kuthatha abanye guts kwaye i-nako ukumelana i-occasional (okanye rhoqo) ukwaliwa. Yona ikunceda ukwazi abanye Isitshayina ngokunjalo, kodwa ngu hayi kunzima ukusebenza ngokupheleleyo kuyimfuneko. Nje khumbula ukuba tone phantsi aggressiveness kuthelekiswa njani indlela Western girls. Nawe kanjalo ufuna ukuza ngaphandle njengoko politer, ukusukela ukuba oku kungumsebenzi ezingabonwayo njengokuba kunokwenzeka ubuthathaka indlela ngamanye amaxesha kwi-West, kwaye eneneni uza ukuphumelela ngaba amanye amanqaku. Elinye, mhlawumbi kungcono indlela yokufumana girls kulo mhla kukuba employ kancinci uncedo oluvela technology. Njenge naliphi na bale mihla inkcubeko, Isitshayina abantu uthando lwabo loluntu malunga apps, kwaye enye uninzi ethandwa kakhulu kwezi ngu WeChat. Hayi kuphela ngaba kuya kuvumela ukuba yongeza abahlobo bakho kwaye wenze amaxesha amaninzi zinto ukuba ubunolindela, kodwa ungakwazi ukwenza entsha abahlobo ngokusebenzisa yayo geo-indawo izakhono. Nje ukumisela isixhobo inkangeleko yakho, misela i-app ukufumana girls kufutshane kuwe, kwaye nisolko kulo mcimbi. Kunjalo, emva ukuba uza kuba ukuya ngokusebenzisa amaxesha amaninzi messaging inkqubo ekumiseleni i-umntu ntlanganiso. Ke kucetyiswa ukuba ahlangane kwi umntu msinyane kangangoko kunokwenzeka okanye nayiphi na girls abo ngathi ayixhasi namnye nje kuba anomdla chatting kakhulu kwaye ugcine ukwenza excuses malunga intlanganiso kwi-umntu, njengoko aba ngabo ngokuqinisekileyo, ixesha-wasters.
Emva zonke, wena asikwazanga yiya China ukufumana usiba ii-pal, yaye kuwe
Njengoko ukuba ubunolindela, kukho kanjalo iinkwenkwezi kwaye nightclubs kwi-enkulu Isitshayina izixeko.
Yakho eyona imali kule meko mhlawumbi izakuba i-shanghai
Oku enkulu yesixeko kunye thriving nightlife ukuba inje eyobuhlobo ukuba foreigners, kwaye ke kanjalo lizele kakhulu omnye abafazi nje malunga nayiphi na isixeko. Kanjalo, ukuba ukhe ubene ikhangela a causal budlelwane okanye nkqu nje omnye-busuku kuma, club okanye i-bar yindawo ukufumana oko. Alikwazi ukwahlula kakhulu ezahlukeneyo ukusuka Kwintshona inkcubeko kulo mba girls abakhoyo nje ikhangela adventure yiya ezi iintlobo ezininzi ezonakeleyo iindawo, kwaye girls abakhoyo ujonge kuba ezinzima budlelwane nabanye bakholisa ukuphepha kwabo. Kuphela ingxaki apha kukuba uninzi bar ke kukunceda kakhulu makhaya kuya kubakho uhlobo expensive, ingakumbi ukuba ukhe ubene ikhangela abafazi abo bamele omnye, elizimeleyo, kwaye ngokucacileyo wanting yokuchitha ixesha kunye indoda kuba ngokuhlwa. Enye into ukujonga ngaphandle kuba kukuba abaninzi clubs kwezi enkulu izixeko bazele langaphandle girls ngokunjalo.
Ukuba oko akuthethi ukuba bother kuwe, ngoko ke hamba ozayo
Ukuba ufuna ngokulula ufuna ukusebenzisa i-intanethi ne-maker ukufumana Isitshayina kubekho inkqubela ukuba umhla, ngoko uyakwazi ukwenza oku kanjalo. Omnye okuninzi apha ukuba akunyanzelekanga ukuba bahamba jikelele town, sifting nge-wonke kubekho inkqubela ukuba ufuna ukufumana umdla kwaye yokufumana asivunywanga okanye kusenokwenzeka angering boyfriend yakhe ukuba yena u-hayi omnye. Kwi-inkumbulo, wonke kufuneka kubekho inkqubela zihlangana a dating kwisiza kufuneka ezikhoyo kwaye ikhangela romance, ngoko ke yonke le iya kuba ngaphantsi i-mba. Kunjalo, omnye disadvantage kukuba uza kuba ukumelana flakes abakhoyo ukudlala imidlalo kwaye uzaku kanjalo kuba ethengisela kunye a million nezinye guys. Konke, nangona, ukususela dating yi amanani umdlalo, nisolko ngamanye amaxesha bhetele ngaphandle usebenzisa dating site oko kuya kukunika ukufikelela ngakumbi abafazi kunokuba ubuya ngonaphakade nako ukuhlangabezana kuyo umntu. Ukongeza, ukuba ukhethe dating site ukuze bathenge caters ukuba foreigners abo bafuna ukuya kuhlangana Isitshayina abafazi, ngoko ke uyazi ukuba yakho prospects ingaba sele anomdla abavela kumazwe angaphandle amadoda. Ukuba ufaka ngoku kwi-China, ngoko ke tyhala ukuhlangabezana kubekho inkqubela ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Kuyinikela yakho inombolo yefowuni, qala texting msinyane kangangoko kunokwenzeka, kwaye wenze izicwangciso ukuba badibane nabo. I-ixesha elide wena linda, ngakumbi kusenokwenzeka ukuba yena ngu-oza kuphulukana nayo inzala. Nkqu ukuba yena ikhangeleka ukuba neentloni ngomhla wokuqala, yena ingaba ngenene kuphela anomdla a inyama igazi umntu, hayi umbhalo kwi desktop, ngoko ke kufuneka futhi ke ufuna ukuba ube naye khangela ukuba indlela njengoko ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka. Ekugqibeleni, kukho iindlela ezininzi ukuhlangabezana abafazi kwi-China, kodwa ezi ingaba mhlawumbi yakho ezintathu eyona iinketho ukuba ukhe ubene ezintsha kweli lizwe (okanye zi nje makhaya) kwaye kuba akukho loluntu womnatha kwangoku. Ye ikhosi, ingxowa-umfazi ngokusebenzisa yakho loluntu womnatha, okanye nangalo makhaya ukufanisa-maker ukuba ke umfazi ukuba ufuna, zilungile, kodwa ngamanye amaxesha uphumelele ukuba unalo luxury xa nisolko kuqala ukufumana ukwazi-China
← Incoko kunye Asian Abafazi kwi-Intanethi - Beautiful Asian Girls Ezifumanekayo ukuba Ukuncokola Nawe e-Asia kum
Abantu babefuna kuba Isitshayina millionaire omnye ladies - Telegraph →